Semalt: Nzọụkwụ iji mee ka ị nweta nchekwa gị na ebe nrụọrụ weebụ Site Hackers
Otu onye na-atụ egwu na ndị nwe ụlọ ọrụ ga-ebi na ya bụ echiche nke onye na-agbanwe haọrụ, ma ọ bụ kpochapụ ya kpamkpam. Ịkwado ọdịnaya na mkpokọta weebụ na-arụ ọrụ siri ike, a ga-emekwa otu ihe ahụ iji chebe ya.
Ewezuga iduzi nkwado ndabere na mpaghara, ebe a bụ ndepụta nke ndụmọdụ ndị Michael Brown nyere, nke Ọkachamara Njikwa Ihe Nlekọta Ndị Ahịa, nke ga-abata n'aka iji hụ na nchekwa weebụ gị:
1. Melite nyocha nile na akwukwọ
Otu n'ime ihe kachasị mma ịme bụ imelite nyocha niile na ederede arụnyere na ihe nchọgharị ahụmgbe niile. Ihe kpatara ya bụ na ngwá ọrụ ndị a na-enwekarị koodu ntinye oghere, nke dị na ndị mmepe nwere ezi ebumnuche yanahackers - wie verwendet man paspelband. Ndị na-emepe ihe nchọgharị weebụ nwere ike iwepụ koodu ahụ, na-achọ ọ bụla adịghị ike ma ọ bụ loopholes ha nwere ike iji uru nke inweta ntinye na njikwana ebe nrụọrụ weebụ. Imelite anaghị ewe oge zuru ezu iji mezue ma nyere aka mee ka ihe ize ndụ ndị a dị irè.
2. Wụnye plugins nche ma ọ bụrụ na ọ dị
Mgbe mgbalị mmelite ahụ kwuru na mbụ, hụ na ihe nchọgharị ahụ nwere nchekwaplugins arụnyere iji gbochie ọ bụla mgbalị site hackers iji nweta nbanye na-enweghị ikike. Nchekwa nchekwa na-aza adịghị ike ndị dị n'imeihe ọ bụla n'elu ikpo okwu ma gbochie ihe ọ bụla nwere ike ime. N'aka nke ọzọ, SiteLock bụ ngwá ọrụ na-aga njem ọzọ iji nye ogenyochaa akụkọ mgbe ọ na-ebute mgbalị ndị hacking. Ọ bụrụ na ọganihu azụmahịa ahụ na-adabere na arụmọrụ kwesịrị ekwesị nke weebụsaịtị, mgbe ahụ SiteLockbụ ego bara uru.
3. Jiri HTTPS
Mgbe ị na-eji HTTPS, onye nwere ike chọpụta na akara ngosi na-egosi na ihe nchọgharị ahụna-ekwusi ike na onye ahụ na-achọ inye ihe ọmụma dị omimi na weebụsaịtị. Akwụkwọ mkpirisi ise dị mkpirikpi bụ ihe dị mkpa nke egosi nchebenakwa na ọ dị mma ịnye ozi achọrọ..Ọ bụrụ na saịtị azụmahịa ahụ chọrọ ndị ọbịa ka ha nye ha ozi nzuzo ha, mgbe ahụọ ga etinye ego na akwụkwọ SSL. Ọ na-abịa na ego ọzọ ọ na-efu mana ọ na-agafe ogologo oge n'ime iwuli ntụkwasị obi nke saịtị na imeọ ka mma.
4. Ajụjụ nchịkwa
Ndị na-ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma bụ ndị nwere ọtụtụ saịtị ịdabara na ndị metụtara SQLinjections. Ntugharị SQL na-eme ihe na ụdị weebụ ma ọ bụ URL nke na-enye ntinye aka na mpụga ozi iji nye ozi mgbe ha dịekpe imeghe. Ihe na-eme bụ na ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ na-etinye koodu n'ime ebe nrụọrụ weebụ nke na-enye ohere ka ha nwee ike ịbanye ngwa ngwa mgbe ọ bụlaachọrọ. Ọ bụ nsogbu nye ndị nwe ụlọ ebe ha kwesiri ịchekwa ozi nzuzo ndị ahịa na-atụkwasị obi na ha ga-eme. Ntọalaajụjụ gbara mbọ hụ na koodu eji maka ebe nrụọrụ weebụ ahụ bụ nke a kwụrụ ma si otú a enye ohere maka mgbakwunye. Ndị na-eme nnyocha na ebe nrụọrụ weebụ na-ahụ nke a agaghị ekwe omume iti.
5. Mpempe Nche Nchebe (CSP)
6. Okwuntughe nchekwa
Ndị mmadụ na-ahọrọ ịhọrọ okwuntughe ha na-adị mfe icheta. Otú ọ dị, onye kwesịrị ịgbalị iche echiche banyere okwuntughe ederede.Ogologo paswọọdụ ahụ, nke ka mma. O kwesiri iji ihe odide, nọmba, na akwụkwọ ozi mee ihe. Okwuntughe doro anya na-etinye iguzosi ike n'ezi ihe nkemkpokọta. N'otu ụzọ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ bụ otu ihe achọrọ maka okwuntughe ndị ọrụ na-eji.
7. Kpochie ndekọ na ikikere faịlụ
faịlụ na nchekwa ọ bụla dị na weebụsaịtị nwere ndenye ikikere na njikwa maka onye nwere ike ịgụ, ide, ma ọ bụ mebie ha. Nye yaonye nwere ohere inweta ikikere nke ọ bụla dabere na onye ọrụ na otu nke ha nwe.